गुन्डा नाइके दिपक मनाङे मन्त्री : यसमा तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ दुई शब्द राख्नु होला ! – Khabar Patrika Np
गुन्डा नाइके दिपक मनाङे मन्त्री : यसमा तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ दुई शब्द राख्नु होला !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख १७, २०७८ समय: १२:१०:१७
काठमाडौंको कुनै पनि हिरासत कक्ष राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेका लागि नयाँ छैन। नयाँ प्रहरी प्रमुख आएपछि पहिलो तार्गेट नै उनी हुन्थे। महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौर, हनुमानढोका परिसर, टेकु परिसरसँगै काठमाडौंका धेरै प्रहरी कार्यालयका हि’रा’सतमा उनको रात बितेको थियो। ०६० साल पुस ११ गते अर्का गु’न्डा ना’इके चक्रे मिलनलाई धा’रिलो ह ति’यार प्र’योग गरेको अभियोगमा मनाङे पक्राउ परेका थिए। **यो समाचार को पूरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
ठमेलमै हप्ता अ’सुली र क’वाडीको ठे’क्का वि’वादमा चक्रे मिलनमाथि मनाङे समूहले आ’क्र’मण गरेको थियो। सो आ’क्रम’णमा मनाङे समूहका गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार, उमेश लामासमेत संलग्न रहेको भन्दै उनीहरूवि’रुद्ध मुद्धा दायर भएको थियो। २०६९ सालमा मनाङेबाहेक उनीहरूले सफाइ पाएका थिए।नमनाङे ०६५ फागुन र ०७० फागुनमा प’क्राउ परेका थिए। जेलबाट पनि गु’न्डाग’र्दी गरेको, ठेकेदारहरूसँग पैसा अ’सुल गरेको, क्रसर व्यवसायीलाई ध’म्क्या’एर सेयर लिएको जस्ता अभियोगमा मनाङेलाई प्रहरीले दर्जनौं पटक प’क्राउ गरेको थियो।
०७० सालमा सेनाका मेजरलाई कु’टपि’ट गरेको आ’रोपमा प’क्राउ परेका मनाङेलाई तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महिना कै’द सुनाएपछि अ’दा’लतमा मुद्दा चल्दा एक वर्ष थप कैद स’जा’यको फैसला भएको थियो।**यो समाचार को पूरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***